केयुका गोल्डमेडलिष्ट डा. जायज, जो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहन्छन् - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ विशेष रिपोर्ट ∕ केयुका गोल्डमेडलिष्ट डा. जायज, जो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहन्छन्
केयुका गोल्डमेडलिष्ट डा. जायज, जो इन्टरभेन्सन रेडियोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गर्न चाहन्छन्
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७९ जेठ २२ गते, १५:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को एमबीबीएसको सन् २०१५ को ब्याच । २० जेठमा यही ब्याचबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ९ सय बढी विद्यार्थी दीक्षित भए । त्यही ब्याचमा सर्वोत्कृष्ट नम्बर ल्याएर टप गर्न सफल भएँ—डा. जायज अधिकारी । पोखराका २६ वर्षीय डा. जायजले ८२.१२ प्रतिशत अंक ल्याएर केयुको आफ्नो ब्याच टप गरेका हुन् । ब्याच टप गरेपछि मणिपाल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी उनले ‘भाइस चान्सलर स्वर्णपदक’ हात पारे ।
पोखरा नदीपुरमा वि.सं. २०५३ सालमा जन्मिएका हुन्, जायज । उनका बुवा हरिप्रसाद अधिकारी वकिल हुन् भने आमा रमा अधिकारीका शिक्षिका हुन् । वकिल बुवा र शिक्षिका आमाका दुई सन्तानमध्ये जायज जेठा हुन् । शिक्षित परिवारमा जन्मेकाले उनको प्रारम्भिक शिक्षामा पनि अभिभावकले विशेष ख्याल राखे ।
जायजको प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय प्रतिभा स्कुल नदीपुरबाट अगाडि बढेको हो । उनले केजीसम्म प्रतिभा स्कुलमा पढें । त्यसपछि कक्षा १ देखि ४ सम्मको अध्ययन ताराकुञ्ज स्कुलबाट पूरा गरे । त्यसपछि गण्डकी बोर्डिङ स्कुल गए । स्कुल जीवनमा उनलाई विज्ञान विषय बढी मनपथ्र्यो । अझ विज्ञानका प्रयोगात्मक कक्षाहरुमा उनको अभिरुचि थियो । ‘सरहरु एक्पीरिमेन्टहरु गर्नुहुन्थ्यो, मलाई त्यसले झन लोभ्याउँथ्यो,’ उनले भने । त्यसबाहेक उनी खेलकुदहरुमा पनि म सहभागी हुन्थे । ‘फुटबल र टेबल टेनिसहरु खेल्न मन पर्छ,’ उनी भन्छन् ।
जायजले गण्डकी बोर्डिङ स्कुलबाटै वि.सं. २०६८ सालमा डिस्टिङसनमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । त्यसपछिको थप उच्च शिक्षा पनि गण्डकी बोर्डिङ स्कुलबाटै अगाडि बढाए । वि.सं. २०७१ सालमा उनले विज्ञानमा विशिष्ट श्रेणीमै कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे । ‘कक्षा ११ मा पुगेपछि बायोलोजी पढ्ने कि फिजिक्स पढ्ने भन्ने कुरामा म निकै दोधारमा थिए,’ उनले सुनाए, ‘एक आफन्त डाक्टरलाई देख्दा यो इज्जतिलो र समाजसेवामा लाग्ने पेशा पनि हो रहेछ भन्ने देखे ।’ त्यसपछि यस विषयमा उनले परिवारसँग सल्लाह पनि गरे । परिवारको सल्लाह र सपोर्टमै उनले डाक्टर बन्ने उद्देश्यका साथ प्लस टुमा बायोलोजी लिएका हुन् ।
वि.सं. २०७१ सालमा प्लस टु सकेपछि उनी काठमाडौ आए । ६ महिनाजति एमबीबीएस इन्ट्रासको तयारी गरे । सुरुमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले प्रवेश परीक्षा भयो । तर, त्यही बेला ज्वरोले च्यापेपछि उनले परीक्षा राम्रो गर्न सकेनन् । ‘२ अंकले मेरो आईओएममा नाम निस्किएन्,’ उनले भने ।
त्यसपछि उनी शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएसका लागि दिने छात्रवृत्तिमा छनोट भए । शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएपछि उनी सन् २०१५ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि मणिपाल मेडिकल कलेज एण्ड शिक्षण अस्पताल पोखरा पुगे । त्यहीबाट डा. जायजले एमबीबीएस उत्तीर्ण मात्रै गरेनन्, गोल्डमेडलिष्ट नै बने । एमबीबीएसको पढाइ कस्तो रह्यो त ? भन्छन्, ‘एमबीबीएस पढाइ थोरै शब्दमा बयान नै गर्न सकिदैन् । त्यहाँ रमाइलो, दुःख, डर, सफलता सबै छन् ।’
डा. जाजय भविष्यमा रेडियोलोजीमा पिजी गर्ने योजनामा छन् । ‘इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी र इन्टरभेसनल मेडिसिनमा मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ । म रेडियोलोजीमै जान्छु,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा रेडियोलोजीको सुपरस्पेशलाइजेशन त्यति राम्रो विकास भइसकेको छैन । मलाई इन्टरभेन्सन रेडियोलोजिष्ट बन्ने रहर छ ।’ उनले नयाँ र बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै भएकोले इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी आफ्नो रोजाइमा परेको बताए ।
केयुको एमबीबीएसका गोल्डमेडलिष्ट डा. जायज उत्कृष्ट हुनका लागि धेरै कुराहरु मिल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘टप गर्न एकआपसमा धेरै कुरा मिलेर आउनुपर्ने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव बाँडे, ‘भित्रबाटै केही गर्न सक्छु भन्ने इच्छाशक्ति, पढाइप्रति लगाव, मेहनत, पारिवारिक वातावरण, साथीभाई र शिक्षकको सपोर्ट चाहिन्छ ।’ उनी टप गर्ने पढाइ अलि फरक हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘एकपटक शिक्षकबाट सुन्नेको कुरा आफै खोज्ने, हेर्ने र त्यो कुरा पटक—पटक पढ्ने गर्दा स्मरण रहिरहने हुन्छ,’ उनले थपे, ‘बुझेर पढ्ने तर केही कुराहरु कण्ठ पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।’
एमबीबीएस अध्ययनताका पनि डा. जायज ८ घण्टा मज्जाले सुत्थे । पढाइकै लागि भनेर उनले कहिल्यै तनाव लिएनन् । बरु, दैनिक तीन घण्टा मनोरन्जनका लागि समय छुटाएको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक पाठ्यक्रमको पढाइसँगसँगै उनले केही समय अनुसन्धानका कुराहरु पनि खोजेर पढ्ने बानी बनाएका थिए ।
डा. जायज मेडिकल शिक्षामा नयाँ आउने विद्यार्थीका लागि यो फिल्डको पढाइलाई पनि अन्य फिल्डकैजस्तो सम्झन सुझाव दिन्छन् । ‘एमबीबीएस पढाइ सजिलो पनि छैन र कठिन पनि छैन्,’ उनले सुझाउँदैं भने, ‘परीक्षामा मात्र नभएर सुरुदेखि नै पढ्ने गर्नुपर्छ । शिक्षकले भनेको कुरा बुझ्ने र त्यो पुनः रिभाइज गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’ डा. जायजकाअनुसार असम्भव र गर्ने नसकिने केही पनि छैन । तर, एमबीबीएस भास्ट भएको हुँदा सुरुबाट नै विस्तारै तयारी गर्दै जानुपर्ने उनले बताए ।
ट्याग : #एमबीबीएस, #काठमाडौं विश्वविद्यालय, #गोल्डमेडलिष्ट, #डा. जायज अधिकारी